सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च ! कति पुग्यो त आज तोलाको ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च ! कति पुग्यो त आज तोलाको ?
सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च ! कति पुग्यो त आज तोलाको ?
सुनको भाउ फेरि बढेको छ । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलाको ७४ हजार ५ सय पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जारी गरेको आजको सुन चाँदीको भाउअनुसार शुक्रबारमात्रै सुनको भाउ एक हजार रुपैयाँ बढेको हो ।
कहिलेसम्म बन्छ कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन ? वैज्ञानिकले गरे यस्तो दाबी
टिभि सिरियल ‘बालिका बधु’ की सुरेखा सिकरी अस्पताल भर्ना
६६ वर्षमा टेक्दै प्रचण्ड, यस्तो छ बढ्दो उमेरमा पनि तन्दुरुस्त रहनुको राज